Filtrer les éléments par date : vendredi, 03 décembre 2021
vendredi, 03 décembre 2021 20:24
Kaominina Amboditandroroho Toamasina II : Ny vazaha no mibaiko ny mpitandro filaminana
Manjakazaka tanteraka ilay vazaha nalefan'ny Filatex anatanteraka ny famefena ny tany ao Kaominina Amboditandroroho Toamasina II, izay tany nohajarian'ny fokonolona rehefa lasa ireo colon naka ny tanin'ny razandreo ny taona 1923.
Nefa aty aoriana ny Filatex nilaza fa azy ny tany, ary anaovana famokarana herinaratra mandeha amin'ny masoandro, veliranon'ny Filoham-pirenena, amin'ny tany mirefy 14ha.
Ankehitriny, dia mamefy ny tany midadasika ao anatin'ny 130ha, izay efa nahazoan'ny fokonolona kara-tany, amin'ny fikambanana FIPAMA (FIKAMBANAN'NY MPAMBOLY MANAMBATSIO) ivondronan'ireto fokonolona izay efa nanajary ny tany.
Mihafana ny raharaha aty an-toerana, ka ahiana hitroatra ireto fokonolona, satria na ny lalana miditra any amin'ny toerana honenan'izy ireo aza dia voafefy avokoa.
Efa eny anivon'ny fitsarana moa ny raharaha, ary malahelo izy ireo, fa toa jeren'ny mpitondra fotsiny ihany, ka na ireo olom-boafidy tokony hiaro ny vahoaka aza dia tsy hita miaro azy ireo.
vendredi, 03 décembre 2021 20:13
Amoron’i Mania : Nizara tambikarama telo volana ho an’ireo sefo Fokontany sy lefiny
Notanterahina androany tolakandro ao amin’ny birao fivorian'ny Faritra ny handraisan’ireo sefo Fokontany sy lefitrin'ny sefo Fokontany ny tambikarama telo volana.
vendredi, 03 décembre 2021 19:48
Asa sosialy Androy : Mifanome tanana amin'ny mpiara-belona
Ankoatra ireo foto-drafitr'asa marolafy sy asa fampandroasana izay efa mandeha dia tsy maintsy atao ihany koa ny asa sosialy, hoy ny Governra n'ny Faritra Androy Dr SOJA Lahimaro.
Tonga nampahery ireo mpianatra mpiofana eto amin'ny kolejy biblika Mahavelo, izay mandalo sedra, ary nitondra ny tsirambin'ny tanana ny Goverinora Faritra Dr SOJA Lahimaro toy ny vary, voamaina sy menaka, notronin'ny Prefen'Ambovombe sy ny Mpanolotsaina ny solombavam-bahoaka HENRI Jean Michel, sady kestora voalohany eo anivon'ny Antenimieram-pirenena.
Toy izany ihany koa ny teto amin'ny fonjan'Ambovombe, satria olombelona ireto voafonja izay hita fa tena reraka ara-tsaina sy sahirana izy ireo ka tsy maintsy omena herin-tsaina sy tosika ara-tsakafo, mba hiverenany indray eny amin'ny fiaraha-monina.
Nandray izany teto, ary nisaotra ny fitondram-panjakana ireo tompon'andraikitra teto amin'ny Fitaleavam-paritry ny fandraharahana ny fonja eto Androy.
vendredi, 03 décembre 2021 19:39
Kestora Jean Michel Henri : Miantso ny mpanatanteraka ny mba hitodihana manokana any Androy
Mitohy androany 03 desambra 2021, ary afaka arahina mivantana amin'ny Radio Nasionaly Malagasy sy ny Televiziona Malagasy ny fihaonana mivantana teo amin'ny Governemanta sy ny Parlemanta ka ametrahan’ireo Solombavambahoaka fanontaniana amin'ny Governemanta.
Nandritra ny fihaonana mivantana, amin'ny maha Solombavambahoaka voafidy azy ao amin'ny Distrikan' Ambovombe Androy, sady Kestora voalohany eo anivon’ny Antenimieram-pirenena, dia ireo zavatra mipaka mivantana any amin'ny vahoaka no notsindrian’Atoa Jean Michel Henri manokana.
Na eo aza ireo ezaka sy asa efa vita, dia mbola mampirisika hatrany ireo mpanatanteraka ny tenako, hoy ny depiote Jean Michel Henri ny mba hitodihana manokana amin'iny Faritra Androy mba tsy hiveremberenan'ny olana maro mandavantaona.
vendredi, 03 décembre 2021 19:38
3 décembre : Journée mondiale des personnes handicapées 2021
3 décembre : Journée mondiale des personnes handicapées 2021.